Pep Guardiola oo ka hadlay faquuq lagula kacay Raheem Sterling | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Pep Guardiola oo ka hadlay faquuq lagula kacay Raheem Sterling
Pep Guardiola oo ka hadlay faquuq lagula kacay Raheem Sterling
Posted by: Ahmed Haadi December 11, 2018
Himilo FM – Macallinka Man city Pep Guardiola ayaa sheegay inay jiraan dhibaatooyin faquuq oo ka dhax dhaca bulshadda isagoo ammaanay Raheem Sterling sida uu ula dhaqmay faquuqii lagula kacay kulankii maalintii sabtida ee garoonka Stamford Bridge.
Kooxda Chelsea oo ah kooxda taageerayaasheeda ay faquuqa kula kaceen Sterling waxay xannibaad saartay 4 taageere walina waxaa socda baaritaanada lagu hayo jamaahiirta arrintaa sameeyay. Taageeraha lagu eedeeyay faquuqa ayaa raali-gelin bixiyay, waxuuna sheegay in uu hadalkaa si kama’ uga dhacay.
“Waxaan Chelsea garoonkeeda tagayay 50 sanno, sababta ayaa ah halka aan fariisto waxaa qabta kaamirada inta badan toddobaadyada, Haddii aan lahaan taariikh hore oo ah inaan waxan oo kale iri, mar hore ayaa la’i qaban lahaa” sidaa waxaa yiri taageeraha la eedeeyay.
Jamaahiirta kooxda Chelsea ayaysan ahayn markii ugu horreysay ee lagu eedeeyo fal cunsurinimo ah, waxaana xusid mudan inay sidan oo kale ula dhaqmeen taageere kooxda PSG ah sanado kahor mar ay Blues-ka Champions League kusoo ciyaartay Paris.
Previous: Santiago Solari oo ka faallooday hadal uu jeediyay Ronaldo
Next: Wax ka ogow qoysaska ugu hantida badan caalamka
Chelsea oo sameysay saxiixeedii 7aad ee suuqa
Southampton oo xiiseyneysa xiddig ka tirsan Everton
Wolves oo dhammeystirtay saxiixa Semedo